Yakachipa CNC yekugaya epurasitiki zvikamu fekitori nevatengesi | Ouzhan
Kugadzirwa kwepurasitiki kunosanganisira zvinhu zvakawanda zvinokodzera machining, nylon (PApolyamide), PC (polycarbonate), ABS (co-polyacrylonitrile-butadiene-styrene), PMMA (plexiglass, poly Acrylic methyl ester), polytetrafluoroethylene (F-4), epoxy (EP ). Kana uchisarudza zvigadzirwa zvemadhizaini ekugadzira, akakodzera mapurasitiki enjiniya anofanira kusarudzwa zvinoenderana nenzvimbo yekushandisa uye zvinoenderana nezvinodiwa zveCCC machine zvikamu.
Plastiki CNC Yekugaya-Precision Plastiki Milling Zvikamu Machining Center
Zvakanakira Ouzhan Plastiki Yakakanywa Zvikamu
- Plastiki ine yakaderera density uye huremu huremu.
- Yakasimba yakatarwa simba uye kuomarara chaiko.
- Yakanaka makemikari kugadzikana.
- Kwakanaka magetsi kuputira.
- Yakanaka kukweshera kudzikisira, kupokana kusagadzikana uye kuzvidzora-lubrication.
- Kuumba kwakanaka uye kupenda kuita.
- Mhando dzakasiyana dzekuchengetedzwa kwemuviri nemakemikari.
- Hazvisi nyore kupfuudza kupisa uye ine yakanaka kupisa kuchengetedza kuchengetedza.
- Yakaderera yekugadzira mutengo.
OEM yakagadziriswa epurasitiki yekugaya sevhisi-China Shanghai CNC epurasitiki yekugaya zvikamu zvemugadziri
Ouzhan inogadzira inosanganisa indasitiri nekutengeserana, ichipa imwechete-yekumira kutendeuka uye yekugaya michina yekugadzirisa masevhisi. Zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, yakakwira-chaiyo CNC yekugaya epurasitiki zvikamu zvine kugadzikana uye zvakavimbika mhando zvinogona kugadziriswa. Idzi michina zvikamu zvinogadzirwa pachishandiswa hwakanakisa mbishi zvigadzirwa, izvo zvinowanikwa kubva kune anozivikanwa-ekururamisa zvikamu zvevatengesi pamusika. Yedu yakasimba uye yehunyanzvi timu yehunyanzvi uye inoshanda manejimendi uye mashandiro sisitimu anogona kuona iko kugadzirwa kwakanaka kwepurasitiki yekugaya muchina zvikamu. Uye zvakare, iyo CNC yakagezwa epurasitiki zvigadzirwa zvinopihwa zvakaringana zviyero zvemhando yepamusoro uye zvinogona kushandiswa mune dzakasiyana maindasitiri mafomu. Uye isu tinogona kupa anokwikwidzana mutengo mabasa epurasitiki CNC azvikuya zvigadzirwa kune edu anokosha vatengi.
Zvinoumba Ouzhan mapurasitiki azvikuya zvikamu
Izvo zvinoshandiswa zvinoshandiswa zvakaringana workpieces zvakagadzirwa muCNC michina yekugadzirisa michina yakakamurwa kuita maviri mapoka: simbi uye mainjiniya mapurasitiki. Simbi dzinosanganisira aruminiyamu chiwanikwa, simbi, mhangura, akasiyana akaomarara alloys, nezvimwewo. Zvakajairika zvinhu muCCC muchina wekugadzirisa zvirimwa mapuraniinjini epurasitiki kunze kwesimbi zvinhu, uye epurasitiki zvinhu zvine zvisingadzoreke kuputira zvivakwa zvesimbi.
Zvakanakira Ouzhan Plastic hwokugaya hwakabvira Service
- Zvese zvakarurama CNC zvigadzirwa zvepurasitiki zvakaiswa pasi peyakaomeswa mhando kuongororwa.
- OEM expression sevhisi inogona kuve nechokwadi chekuti iwe unogamuchira izvo zvaunoda zvigadzirwa, tsigira DDP, CIF, FOB nedzimwe nzira dzekubhadhara dzekufambisa kuona kuti vatengi vanogona kugamuchira izvo zvinhu zvakachengeteka.
- Zvinoenderana nevanodhirowa kana sampuli yeakarurama epurasitiki ekugaya zvikamu zvekugadzira.
Pashure: OEM kabhoni simbi yekugaya maindasitiri emuchina zvikamu
Zvadaro: CNC kutendeuka zvikamu
OEM kabhoni simbi azvikuya maindasitiri machine S ...
Customized Stainless simbi azvikuya zvikamu proces ...
Customized kabhoni simbi azvikuya zvikamu processin ...